Lalana Tsarasaotra-Ivato : izay vao hita ny vola avy amin’ny Sinoa | NewsMada
Lalana Tsarasaotra-Ivato : izay vao hita ny vola avy amin’ny Sinoa
Araka ny tatitra hita tao anatin’ny filankevitry ny minisitra ny 30 mey farany teo, vita sonia ny 18 mey teo ny fifanarahana eo amin’ny fanjakana malagasy sy ny banky sinoa Export-Import Exim Bank. Voarakitr’ity fifanarahana ity ny fampindramam-bola hanatanterahana ny fanarenana ny lalana Ivato-Tsarasaotra sy ny eny amin’ny Boulevard de l’Europe mankeny amin’ny Tanànan’ny Frankofonia Andohatapenaka.
Tsy fantatra sady tsy nampahafantarina ny tentimbidin’ny vola notrosain’ny fitondrana amin’ity banky ity. Tsy misy antsipiriany koa ny hanatanterahana azy, ny fotoana hanombohana sy ny faharetan’ny asa, ny orinasa (azo antoka fa tsy maintsy orinasa sinoa).
Tsy vita tanteraka ireo lalana ireo, fa nentina nanenjehana ny fivoriamben’ny Frankofonia fotsiny. Misokatra ny lalana eny amin’ny Boulevard de l’Europe mankeny amin’ny Tanànan’ny Frankofonia, mivoaka eny amin’ny vahilava. Nakatona ary tsy azo ampiasaina kosa ny etsy Tsarasaotra-Ivato, nolazaina fa tokony ho efa notohizana namboarina ny volana oktobra 2017. Ankehitriny, potika sahady ity lalana ity na tsy nampiasaina akory aza.